Umvelisi we-hydraulic jack kunye nabathengisi beenjini ze-crane | I-Epont Jack
Umvelisi we-hydraulic jacks
Inkampani ithathe inxaxheba kuphando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, i-hydraulic jacks kunye neemveliso ze-hydraulic.
Iimveliso ze-Epont Jack
I-Epont Jack ifunyenwe njengenye yezincwadi zePorta Plack Jack jack, sivelisa uluhlu olubanzi lwePorta Sun Jund Jack Imveliso ebalaseleyo kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okungakumbi. Iimveliso zethu zihambelana neemfuno ezahlukeneyo zomzi-mveliso kumashumi eminyaka, siphucule izixhobo zethu zokwenza imveliso kunye nezakhono zabaphathi abafanelekileyo, iinjineli kunye neengcali.
I-Epsunt i-hydraulic ogqwesileyo ibhotile yebhotile, inkampani yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, i-Jack ye-Jack, yophuhliso, imveliso kunye nentengiso.
Umvelisi we-jack jack jack
I-YIPEGJACT ifunyenwe njengenye yezincwadi zePorta Play Jack jack, sivelisa uluhlu olubanzi lwePorta Juck jack kwimveliso esemgangathweni kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu. Iimveliso zethu zihambelana neemfuno ezahlukeneyo zomzi-mveliso kumashumi eminyaka, siphucule izixhobo zethu zokwenza imveliso kunye nezakhono zabaphathi abafanelekileyo, iinjineli kunye neengcali. Umgangatho kunye neempawu ezingapheliyo zePorta Plack Jack ziyancomeka kwaye ziyaxatyiswa ngabathengi bethu ezikwimimandla yentengiso ezahlukeneyo. Uluhlu lwethu lweemveliso lubelungele abathengi kuba iPorta Sun Jack ebonelelwe ngu-US ibonelelwe ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabaxumi.
I-YIPEGJACT ifunyenwe njengenye yezincwadi zePorta Play Jack jack, sivelisa uluhlu olubanzi lwePorta Juck jack kwimveliso esemgangathweni kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu. Iimveliso zethu zihambelana neemfuno ezahlukeneyo zomzi-mveliso kumashumi eminyaka, siphucule izixhobo zethu zokwenza imveliso kunye nezakhono zabaphathi abafanelekileyo, iinjineli kunye neengcali. Umgangatho kunye neempawu ezingapheliyo zePorta Plack Jack ziyancomeka kwaye ziyaxatyiswa ngabathengi bethu ezikwimimandla yentengiso ezahlukeneyo. Uluhlu lwethu lweemveliso lubelungele abathengi kuba iPorta Sun Jack ebonelelwe ngu-US ibonelelwe ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabaxumi. Siqinisekisa ukuba iindleko zeenkonzo zethu zincinci.
Eyona nto iphambili ye-welding ye-hydraulic jack yomthengisi
Inkonzo yokuzalisa yeemfuno zeshishini ezizodwa okanye ezinzima.
I-Epont ye-Epont yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, i-hydraulic jack, i-jack ye-3T, yomgangatho, umgangatho, imveliso kunye nentengiso.
1. Sineziqinisekiso zemfundo: Sinesatifikethi semfundo esisesikweni
2. Itekhnoloji yeMveliso: Uphando oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha
3. Ukoneliseka kwabathengi: Nika imveliso eyoneleyo
Umgangatho kunye neempawu ezingapheliyo zePorta Plack Jack ziyancomeka kwaye ziyaxatyiswa ngabathengi bethu ezikwimimandla yentengiso ezahlukeneyo. Uluhlu lwethu lweemveliso lubelungele abathengi kuba iPorta Sun Jack ebonelelwe ngu-US ibonelelwe ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabaxumi. Siqinisekisa ukuba iindleko zeenkonzo zethu zincinci.
Inkampani ithathe inxaxheba kuphando, uphuhliso, imveliso kunye ne-sayasof ezahlukeneyo ze-hydralic jacks kunye neemveliso ze-hydraulic.I-YIPEGJACT ifunyenwe njengenye yezincwadi zePorta Play Jack jack, sivelisa uluhlu olubanzi lwePorta Juck jack kwimveliso esemgangathweni kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu kunye nokuchaneka okukhulu. Iimveliso zethu zihambelana neemfuno ezahlukeneyo zomzi-mveliso kumashumi eminyaka, siphucule izixhobo zethu zokwenza imveliso kunye nezakhono zabaphathi abafanelekileyo, iinjineli kunye neengcali.
Sinophuhliso lobungcali, iqela lemveliso kunye neqela lentengiso elibalaseleyo.
I-Zhejiang Yuipeng Matshini Coupery Coupin Counch River Delliver Dellist Belt Beltar Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belt Belta, i-Hangzhou, eNingbou City, njl njl. . Inkampani yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack 3t, indawo yothungelwano phantsi kwe-jack elona shishini likhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso.
Shiya i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikuthumelele isicatshulwa sasimahla soluhlu lwethu olubanzi lwezinto ezizayo!